इटालियन Verb Participles
by माइकल सेन फिलिपो
सहभागी एक मौखिक विशेषण र संज्ञा को धेरै नजिक छ। यसले यसको नामलाई यी श्रेणीहरूमा (भाग लिन्छ ल्याटिन डेमटपमा, भाग लिन्छ तथ्य) को लागि। इटालियनमा उहाँ दुई चरणहरू छन्, वर्तमान र विगतका।
वर्तमान सहभागिताको प्रयोग एक क्रिया (स्टीयरिंग व्हील, स्टाम्प, बाँकी) रोमान्स भाषामा अपरिहार्य छन्, जुन सामान्यतया प्रजातिहरु को व्याकरण र संज्ञा को प्रकार्य हो।
उनीहरूको भ्वाईस प्रणालीको लागि अपरिचित विगतका अतीतका रूपमा अतीतको रूपमा हो (पूर्व: उकालो, निदाई, बायाँ), जुन कम्पाउन्ड टेन्सनको गठनमा स्पष्ट छ।
लैटिनका विभिन्न भाषाहरू पनि भविष्यको रूप हो।
इटालियन उपस्थित विशेष
ल्याटिनमा हालको सहभागिता एक पटक मात्र असाधारण अनियमित थियो, त्यसैले यो नियमिततालाई इटालीमा पनि हस्तान्तरण गरिएको छ। यो यस तरिकामा बनाइएको छ: अनन्तको अन्त वर्तमान प्रतिभाशाली (-ante, -ente -ente) को द्वारा प्रतिस्थापित गरिन्छ।
अनियमित रूप भाग, प्रतिकूल, nulladicente, ठेकेदार आदि असामान्य संकेत को निष्कर्षण को पालन गर्नुहोस;
आकार-ineient को लागि, कृपया तेस्रो अनुकरणमा वस्तुलाई संकेत गर्नुहोस्: भागहरू in -iente।
यो मौखिक रूप सामान्यतया एक सापेक्ष क्लोज को बदलन गर्दछ, उदाहरण को रूप मा:
यदि तपाईं विभिन्न प्रकार को पिक्सेलिस ('ची कंटेन') को उपयोग गर्न सक्छन्;
Si tratta di un uccello proveniente dall'Arica ('che proviene');
क्वेस्ट ए पेरोला डेरिवैंट डटल लैटिनो ('ची डेरिव')।
क्रियाकलापको फारम आफै, वर्तमान सहभागिता दुर्लभ छ। प्रायः, वर्तमान उपस्थितका क्रियाकलापले संज्ञा (सहायक, शिक्षक, हेरविचार) वा adjectives (भारी, चिन्ता, छुटेको) को जन्म दिन्छ, जुन सबै लिङ्गहरू लिंग अदृश्य हो (पुरुष र महिला दुवै)।
कहिलेकाहिँ विज्ञापनवर्तीहरू (जस्तै, अन्तिम शब्द) बनाउन सक्छ। व्युत्पन्न प्रक्रियाले ल्याटिनको दिनको रूपमा इटालियन भाषाको विकासको समयमा धेरै नै सिर्जना गरेको हुन सक्छ। बाँच्न, लैटिनबाट प्रत्यक्ष विरासत सहित, जस्तै प्रकार वाक्यांशहरू जस्तै वा होइन, भित्री शब्दहरू ल्याटिन क्रियाकलापबाट बनेको वा प्रयोग गर्न नसक्ने भए पनि:
अनुपेन्टमबाट अनुपस्थित, वर्तमान सहभागिता, हेर्नुहोस् abesse ल्याटिन क्रिया ('अनुपस्थित हुनुहोस्')
यो वर्तमान सहभागिता अघिल्लो जस्तै प्रक्रियाको अनुसार बनाइयो
अझै, अवरोधमा द्वारा रचना गरिएको छैन, सहभागी हुन, हेर्नुहोस् लैटिन क्रिया ('विरोध गर')
यी अवस्थामा, यो असामान्य छैन कि प्रस्थानको क्रिया लगभग अज्ञात छ, दुवै रूप र अर्थ मा।
फर्काउनु भनेको सामान्यतया अधिक मौखिक प्रयोग गर्नु हो, अतीतमा धेरै धेरै पल्ट देखा पर्यो, जस्तै कि विभिन्न साहित्यिक स्रोतहरु लाई इटाली साहित्य को इतिहास को समयमा बनाइयो। क्रियाको प्रयोग फारम मुख्यतया ग्रंथहरु लाई विशेष रूप देखि निर्दिष्ट मा जीवित रहछन, अक्सर औपचारिक मा उत्पादनहरु:
म सबै भन्दा बडा विश्व बैंक को विज्ञापन को लागि योगदान दि्छ ।
जहाँ नामकरण शैली चरम (बयान को चरम वर्णन संग) ले लिया गएको छ, वर्तमान सहभागिता को कहिले काँही एक यौगिक आकार उत्पन्न गर्न को लागि प्रयोग गरिन्छ: वास्तव मा सहायक क्रिया को वर्तमान संग प्राप्त निर्माण को उपयोग गरेर र पहिले भाग ले क्रिया संवैधानिक हुन।
परिणाम केहि हुनेछ जस्तै:
सबै भन्दा पनि आमंत्रित छ कि तपाईं सबै सत्र को बारे मा पूर्व निर्धारित गर्दछ।
यस मामला मा, aventi partecipato को अधीनस्थ क्लॉज स्पष्ट मा जो पछिल्लो ( साक्षात्कार ) को सम्बन्ध मा संकेत दिइन्छ, यहाँ एक भाषात्मक क्यालज जुन एक मौखिक रूप गैर प्रणाली मा उत्पन्न गर्दछ। सहभागीहरूको तुलनामा, फरक तथ्य यो तथ्यमा निहित छ कि कार्य पूरा गरिनेछ। यो लक्जरी को सिंटेक्टिक संरचना हो, विशेष रूप देखि इटाली नौकरशाही मा लोकप्रिय छ, जो अक्सर सहभागिता र gerund को रूप मा तरिका को तरिका मा कोठा बनाउन को लागी रोकछन। सहायक संग प्राप्त एक तुलनीय फारम सम्भव छैन सम्भव छ किनकि इटालियन व्याकरण पहिले नै विगतको सहभागिताको प्रयोग प्रदान गर्दछ।
इटालियन अतीत भाग ले ल्याटिन बाट सीधा लिखित रुपमा लिइएको छ जुन एक पटक एकदम अनियमित थियो, किनकि यसले हालको भन्दा अन्य विषयको विषयमा उनीहरूको पछाडीको दृष्टान्तमा खेल्दछ।
पहिले साझेदारीको फारम
इटालियन भूत भागमा, रिमोट विगतको साथ समय अधिक अनियमित छ। अनन्तको नियमित रूपमा समाप्त हुन्छ जसलाई अतीतको सहभागीताद्वारा प्रतिस्थापित गरिन्छ (-तो, -टो -टो।) पहिलो संवाधान -न उदाहरण। दोहोर्याउदछन्। तेस्रो-टाढाको उदाहरण समावेश गर्दछ। अतीतको कार्यान्वयन -तो (सुँगुर) -ओटो (सामग्री) -टो (क्रिया)
क्रियाको दोष दोषी छ र अघिल्लो सहभागिताले क्रिया (भाग) को भागको साथ कम्पाउन्ड टेनिस बनाउँछ।
असंपीडित सर्वनामहरूको स्थितिको रूपमा, सेक्शनका अन्य परियोजनाहरू हेर्नुहोस्।
लगभग सबै इटालियन क्रियाकलापहरू पहिलो विजय (-रेयर) नियमित हुन्छ। एकमात्र अपवाद क्रिया हो, जुन मौलिक रूपमा दोस्रो हो। विगतको सहभागिताको फारम बनाइयो, जुन धेरै कम्पोजिहरू (नकली> नकली) पनि छ।
इटालियन क्रियाकलापको दोस्रो विजय (-रे) को अर्थ सामान्यतया अनियमित हुन्छ। भेदभाव गर्नको लागि दोस्रो र तेस्रो लैटिन कन्जुगेशनबाट व्युत्पन्न, दुई वर्गमा विभाजित छ।
शब्दहरू भित्र-वा स्वरसँग र त्यसपछि प्रत्याशित बलियो रूपमा (लाइट) जस्तो सामान्यतया चिकनी हुन्छ (राख्नुहोस्> राखिएको); त्यहाँ कुनै कमी छैन, तथापि, अपवादहरू:
अघिल्लो सहभागितामा -s (राय> प्रकट भयो, आक्रमण> अर्जित); - म अघिल्लो सहभागीमा रहनेछु (बाँकी> बाँया, हेर्नुहोस्) देखियो;
यसका लागि अङ्ग्रेजी भाषाको अस्तित्वको अर्थ हो। यसका लागि अङ्ग्रेजी भाषाको भाषामा लेखिएको छ। मुख्य रूपहरू निम्न हुन्:
अघिल्लो भाग लिईएको in -s (पिघल> क्षेत्र);
अघिल्लो सहभागिता in -sso (अनुदान> प्रदान गरिएको);
विगतको सहभागितामा -to (to> living);
अतीत सहभागिता in -tto (ब्रेक> टूटे);
- म अघिल्लो सहभागीमा (स्थान> स्थान)।
इटालियन क्रियाकलापहरूको तेस्रो विजय (सामान्यतया) नियमित रूपमा नियमित हुन्छ। अपवादहरू निम्न हुन्:
क्रियाहरू in -consonante + rire अघिल्लो भाग लिने फारम (खुल्ला> खुला, s) प्रस्ताव> (हरू) प्रस्तावित;
क्रियाहरू in -vocale + rire अघिल्लो सहभागितामा -rso (प्रकट> प्रकट);
अरुहरू पूर्ण रूपमा अनियमित क्रियाहरू छन् (मर्नु> मृत आउँ> आए)।
अवधारणात्मक सर्बहरू र विशेष कारणहरू
तिनीहरू हराइरहेका हुन सक्छन्, अज्ञात दोषी क्रियाकलापहरूमा, क्रियाहरूको रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा, विरूपण, छुट्याइएको, खुट्टा, सिचाइको रूपहरू। क्रियाकलापको लागी, हामीले शिलले छाएको छ अब अहिले दुरुपयोग गरिएको छ। अन्य पटक तपाईंसँग दुई फारामहरू छन् (हुन्छ> सफल भयो, सफलता)।
क्रियाकलापमा दुइटा फारामहरू छन् फरक अर्थहरू, एक नियमित सफल (= विकल्प) र असामान्य सफलता (= हो)।
त्यसैगरी सहभागीहरूलाई दुई फरक अर्थहरू प्रदान गर्नुहोस्: प्रदान गरिएको (= आपूर्ति) र गरे (= यो यति भयो)।
त्यसैगरी क्रियाकलापलाई दोहोरो अर्थको दुई भागहरू मानिन्छ: विचार (= मननित) र प्रतिबिम्ब (= दर्पण गरिएको)।
क्रिया बाईसियोजेयर पहिलेको सहभागिता छ (आवश्यक छ), तर कम्पाउन्ड टेनिस को गठन छोडिन्छ, विशेषकर यदि यदि एक पारदर्शी तरिकामा प्रयोग गरिएको छ (जस्तै। यो जान आवश्यक छ)।
इटालियन अतीतको विशेष सङ्घर्षमा
विगतका सहभागिता मुख्यतः कम्पाउन्ड टेन्सको गठनको लागि प्रयोग गरिएको हो जुन पहिलेको चिसो वा अतीत पूर्ण, सहायक verb essere वा avere (म गएका थिए, मैले खाएको) संग। यस शब्दको यो नजिकको यो पुष्टिले पुष्टि गरेको छ कि भ्रामक रूपहरु संग हुनुको रुपमा, विशेषण जस्तै, संख्या र लिंगको विषयलाई लिन सकिन्छ जसलाई उनीहरूले उल्लेख गर्दछ।
सहायक संग संयुक्त र आउनुहोस्, आन्तरिक क्रियाकलापको विगतको भागको रूप तल प्रयोग गर्न प्रयोग गरिन्छ: माउस खाएको थियो; तपाईं आलोचना गरिएको छैन। साथै यस अवस्थामा, फारमहरू विषयमा लिंग र नम्बरको लागि ट्यून हुनुपर्छ।
क्रियाकलापको कुनै महिला वा बहुवचन रूपहरू छैनन् कि, भित्री हुनुको बावजूद, विवाह भएका छन् (लंच, गपशप)।
सहभागीको सम्झौतामा नियम र भाषाई संदेहहरूका लागि (लुकायो मलाई छोडेर / एक, तपाईंले राखेको क्रीम / ए, मैले बिर्सनुभएको छैन / a), भर्खरको विगतको गठनमा अध्याय हेर्नुहोस्।
इटालियन विगतका विशेष अधीनस्थ समूहहरूमा
यस क्रिया फारम को एक विशिष्ट उपयोग को अनुबंध मा निहित छ। यसको मतलब छ कि अतीत सहभागिता को रूप क्रिया को प्रतिस्थापन गर्दै छ।
हाम्रो बारे मा , सारा सी è guardata intorno।
यसैले बराबर छ:
डोपियो यो युग हाम्रो बारे मा बताछन, सबै भन्दा राम्रो छ।
यस निर्माण को लाभ बयान को एकदम सरल सरलीकरण हो।
अधीनस्थ क्लोज (बायाँ घर) मा सहभागीको मौखिक रूपले मुख्य कला अस्थायी रूपमा संकेत गर्दछ जुन मुख्य क्लोजमा संकेत गरिएको छ (क्रिया द्वारा संकेतित क्रियाकलापले अगाडि देख्न भन्दा अगाडि)।
विकल्पमा सहभागीको प्रकार्य प्रायः अस्थायी प्रस्तावको निर्माणलाई अनुमति दिन सकिन्छ, जस्तै उदाहरणमा देखाइएको छ। यस प्रकारको माध्यमिक वाक्यांशको अतिरिक्त, विगतको सहभागिताले अन्य अर्थहरूसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ; सम्झौता गरिएको पहिलो सापेक्ष क्लोजमेन्ट:
सोनो राज्य रिटवारेट ले scarpe डेला ragazza uccisa la settimana scorsa।
यस विषयलाई अन्यथा पूर्ण स्पष्ट स्पष्ट विषय ( ला ragazza ची युग स्टेटा uccisa ) को सामने प्रकट गरिनेछ।
विगतका सहभागिता कारणले दिएको प्रस्तावमा प्रयोग गरिएको छ:
प्रोटोकोटा , ला स्किमिया हा हा मोसो ले ओ ओस्पेल डेलो चिडियाघर।
जहाँ provocata कारण siccome युग स्टेटा प्रोकोकोटा हो ।
वाक्य रैपिरामा विगतको सहभागिताको पनि एक विशेषता छ:
पुरा तरिकाले प्रवृत्ति को रूप मा, कुनै पनि अन्य चीजहरु लाई नहीं हो।
निर्माण संरचना को तुलना मा धेरै सरल छ माल्गेरोडो को स्टेटा प्रोटोटाटा रैपेटुटेटी, कुनै स्किमिया को रूप मा धेरै राम्रो तरिकाले नहीं।
शब्द संरचनामा इटालियन विगतको विशेष
यसका लागि, व्याख्याले विशेषण र क्रियाकलापको क्रिया फारमको कोटिको नजिक पुग्दछ, पहिलेको सहभागिता व्यापक छ। यो भावना निष्क्रिय हुन सक्छ (गलत जवाफ; एक असफल परियोजना, लिखित अनुरोध) वा सक्रिय (मृत चूहा)।
विगतका सहभागिता संज्ञा को गठन मा धेरै सामान्य छ: झटका, स्कोल्डिंग, प्रतिनिधि, तथ्य, जन, राज्य, दौड, पाठ्यक्रम (क्रिया देखि संज्ञा देखि व्युत्पन्न)।
प्राय: प्रश्नहरूको शब्दहरू ल्याटिन फारमको विगतका भागबाट सीधा व्युत्पन्न हुन्छन्।
अतीतका सहभागीहरूको संख्या -टाटा र -टो बाट व्युत्पन्न, संज्ञाबाट संज्ञामा शब्दहरू सिर्जना गर्न प्रयोग गरिन्छ। उदाहरणका लागि, संज्ञा को लागी हामी जोडिज एन्टिटिक्स: महिला फेला पार्यो, यो प्रायः एक्शन (नज,) वा यसको परिणाम (स्पैग्मेटी, काली मिर्च) लाई व्युत्पन्न गरिन्छ। यो एक राज्य या एक आरोप मर्दाना संज्ञाहरु प्रत्यय -टो (मार्क्सिस, गुप्तता, संरक्षित) संग बनाईएको छ।
फ्रांसीसी अभिव्यक्ति कसेर लेस पिडिजको लागि अर्थ र समकक्षहरू
Peut Se Tutoyer मा? - फ्रांसीसी अभिव्यक्तिले बताएको छ
"बाहिर" आइडिया र अभिव्यक्ति
'टर्न' प्रयोग गरे भावनाहरु, जा रहेको राज्यहरु
बोडेलले अंग्रेजीमा के गर्छ?
फ्रांसीसीमा विचार व्यक्त गर्दै
Le Français Québécois - प्रेम र भावना फ्रांसीसी क्यानाडा शब्द शब्दावली
लाओशी - दैनिक मन्डारिन पाठ
लुमेननेसिस फ्रान्स - पुरातात्विक डेटिंग को ब्रह्माण्ड विधि
ओलिन कलेज जीपीए, एसट र एक्ट डेटा
तपाईंको गिटार भन्दा स्पष्ट ध्वनि कसरी प्राप्त गर्ने
दूध को अम्लता या पीएच के छ?
आफ्नो औंला प्वाइन्ट गर्नुहोस्
ओक्लाहोमा प्रवेश विश्वविद्यालय
Tres Zapotes (मेक्सिको) - ओल्मेक कैपिटल सिटी Ver Verruz मा
धन्यवादको बारेमा कुन समाजशास्त्रले हामीलाई सिकाउन सक्छ
गोल्फ टर्म 'टी शॉट' को व्याख्या
बेस्सरी घोडाको जाटका कथा
प्रतिशत रचना परिभाषा
स्कोरकार्ड प्रतिनिधिको 'ह्यापप्याप' पंक्तिमा अंकहरू के गर्ने?
अमेरिका मा महिला बास्केटबल को इतिहास
शीर्ष 10 कूल क्लासिक रोड ट्रिप गीत
प्राचीन ग्रीसका नक्साहरू कसरी देशले साम्राज्य बनायो
प्रसिद्ध एशियाई शास्त्रीय संगीतकारहरू
अटलांटिक 10 सम्मेलन विश्वविद्यालयहरूमा प्रवेशको लागि एसएटी स्कोर
माइकल जैक्सन बहरीन: पप मेट्स इस्लाम
हाई स्कूल मा वास्तुकार बन्नु पर्छ
बाइबिलको पुस्तक जर्मन र अंग्रेजीमा